.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: FlashSongထဲတွင် video file ထည့်နည်း
FlashSongထဲတွင် video file ထည့်နည်း
ဒီနေ့တော့ flashsong ၀ါသနာရှင်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် flashsong ထဲမှာ video ထည့်နည်းလေးကိုရေးသားပေးပါမယ်။
အရင်ဆုံး မိမိ ထည့်ချင်တဲ့ video ကို edit လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
video မူရင်းအတိုင်းထည့်လို့ရပေမယ့် flashsong size ကတော့ကြီးသွားမှာပါ။
videoဖြတ်ရန်အတွက် software ကိုတော့ ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ဖြတ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။
ပုံ(၄)avi format ရော quality ပါ ပုံထဲကအတိုင်းထားတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ video ဖိုင်ဖြတ်နည်းပြီးသွားပါပြီ။ထည့်နည်းဆက်ရေးပါမယ်။
ပြီးရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း ပြောင်းသင့်တာလေးပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
quality တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် size ကြီးသွားမှာဖြစ်သလို လျှော့လိုက်ရင်Qualityကကျသွားမှာပါ။
videoဖိုင်လေး ထပ်ထပ်လာနေဖို့အတွက် movie clipပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် video ထည့်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
Posted by FlashSongCrazy at 03:10
Labels: Flash, နည်းပညာ